22/05/2022 - 13:15:11 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
22/05/2022 - 13:10:21 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Ciidamada shisheeye ee duullaanka ku jooga deegaanno katirsan gobolka Sh/dhexe ayaa sare uqaaday tacadiyada ay ugeysanayaan dadka shacabka ah ee aan hubeysnayn.
22/05/2022 - 11:53:54 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
22/05/2022 - 10:55:10 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Caarre Saleebaan oo ah nin dhallinyaro ah oo u dhashay Jabbuuti ayaa lagu xidhay degmada Gebilay oo maamul ahaan hoostegi jirtey Hargeysa.
21/05/2022 - 23:15:34 Wararka Gudaha Warsame Warfaa
21/05/2022 - 16:59:08 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
21/05/2022 - 16:50:04 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada hoose ayaa sheegaya in weerar culus lagu qaaday ciidamo katirsan maamulka 'Jubbaland' ee shisheeyaha la shaqeeya.
21/05/2022 - 16:27:28 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Mas'uul sare oo katirsanaa melleteriga dowladda Xabashida Itoobiya ayaa si lama filaan ah ugasoo muuqday maxkamad fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa.
21/05/2022 - 11:25:11 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Ku dhowaad 10 askari ayaa dhintay kadib markii weerar kedis ah lagu qaaday bar koontarool oo kutaal degmo dhanka waqooyi uga beegan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
21/05/2022 - 11:17:24 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
20/05/2022 - 05:46:46 Wararka Gudaha Warsame Warfaa
19/05/2022 - 18:04:45 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
19/05/2022 - 17:49:42 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
19/05/2022 - 17:27:03 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
19/05/2022 - 11:30:54 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
18/05/2022 - 21:31:43 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
18/05/2022 - 19:06:25 Wararka Gudaha Warsame Warfaa
18/05/2022 - 18:34:52 Wararka Gudaha Warsame Warfaa
18/05/2022 - 14:39:33 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
18/05/2022 - 14:24:31 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow